Le Paris Russe de Chanel - HIGH JEWELLERY DREAM
Gabrielle Chanel ၏ Maison ၏နောက်ဆုံးပေါ်ရတနာစုဆောင်းမှုစုဆောင်းမှုတွင်ရုရှားနိုင်ငံ၏အမြင်။
ပဲရစ်၊ ရုရှားနှင့်ရှန်နလ် - ၁၉၂၀ ပြည့်နှစ်များကတွေ့ဆုံခဲ့သည့်သုံးခု။ ယနေ့အထိပဲ့တင်ထပ်နေသည့်ပြင်းထန်သောဉာဏ်ရည်နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းအားများ Chanel၏နောက်ဆုံးပေါ်ရတနာစုဆောင်းမှု Le Paris Russe de Chanel.
Aigle Protecteur Necklace - Le Paris Russe de Chanel ။
ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်ကြစို့။ ပဲရစ်, 1920 ခန့်။ ၃၁ Rue Cambon မှာ Mademoiselle Chanel ရဲ့တိုက်ခန်းကိုကျွန်တော်တို့ဝင်သွားတယ်။ ရုရှားအင်ပါယာ၏ခေါင်းနှစ်လုံးပါသောလင်းယုန်နှစ်ကောင်ဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားသောကုန်းရိုးပေါ်၌ရပ်နေသည်။
နက်နဲသည့်အနက်ရောင် ၀ တ်စုံကို ၀ တ်ဆင်ထားသည့်လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သောအမျိုးသမီးတစ် ဦး သည်သူမမျက်လုံးမှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်တပ်ဆင်ထားသည့်သူမ၏ရှုပ်ထွေးသောပုံရိပ်ကိုကြည့်လိုက်သည်။ ဇိမ်ခံပါတီပွဲကျင်းပနေပြီးအမျိုးသမီးကသူမ၏စိန်နှင့်ပလက်တီနမ်လည်ဆွဲကိုလေးစားမိသည်။
Le Paris Russe de Chanel ။ Aigle ကာကွယ်စောင့်ရှောက်။ ပလက်တီနမ်နှင့်စိန်။
Aigle Protecteur လည်ဆွဲ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များအားကျွန်ုပ်တို့တန်ဖိုးထားသည်။ ရှားရှားပါးပါးဒိုင်းလွှားဖြတ်ထားသောစိန်နှစ်ခုနှင့် briolette ဖြတ်ထားသောစိန်များကိုပလက်တီနမ်တွင်တပ်ဆင်ထားသည်။ နောက်တစ်ခါတွင်လင်းယုန်ခေါင်းပုံသဏ္theာန်ကိုအမျိုးသမီးနှင့်အလှပြင်ဆိုင်တို့ကိုကာကွယ်ပေးသည်။
ခေါင်းနှစ်လုံးပါသောလင်းယုန်သည်ပဲရစ်မြို့ရှိ Gabrielle Chanel ၏တိုက်ခန်းရှိမှန်ဘီလူးမှန်ကိုကျော်လွှားနိုင်သည်။
ပါရီ၊ ရုရှားယဉ်ကျေးမှုနှင့် Gabrielle Chanel - Maison ၏နောက်ဆုံးပေါ်အမြင့်ဆုံးရတနာစုဆောင်းမှုကိုဖြတ်သန်းသောကမ္ဘာသုံးခု၊ Le Paris Russe de Chanel။ သို့သော်မည်သို့ဖြစ်ပျက်ခဲ့သနည်း။
Le Paris Russe de Chanel ။ Aigle Cambon Cuff ။ ရွှေဝါရောင်၊ လင်းကျောက်နှင့်စိန်များ။
ဘိုရှီဗစ်တော်လှန်ရေးအပြီးတွင် ၁၉၁၇ ခုနှစ်တွင်လူမှုရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအထက်တန်းလွှာမှရုရှားလူမျိုး ၅၀,၀၀၀ နီးပါးသည်ဥရောပသို့ပျံသန်းခဲ့ပြီးအများစုမှာပါရီနှင့်အနီးအနားတွင်ခိုလှုံခဲ့ကြသည်။
၎င်းတို့သည်အရှက်ရသူများ၊ သူတို့၏ဘွဲ့များမှဖယ်ရှားခြင်း၊ သူတို့၏စည်းစိမ်ဥစ္စာကိုသူတို့ မှလွဲ၍ အခြားသူများ မှလွဲ၍ အခြားသူများနှင့်သူတို့၏ဘ ၀ များကိုအစမှပြန်လည်တည်ဆောက်ရန်ဖြစ်သည်။ သူတို့သည် ပန်းချီနှင့်ပေါ်တာများကိုလှည့်စားခဲ့သည်။ ” ယောသပ် Kessel သည်သူ၏၌ဖော်ပြထားသကဲ့သို့ ည၏မင်းသား 1927 ၌တည်၏။
Le Paris Russe de Chanel, Blé Maria Brooch ။ Gabrielle Chanel နှင့် Maria Pavlovna နှင့်ရင်းနှီးမှုရှိသည်။ ရွှေဝါရောင်၊ ရွှေဖြူ၊ အဝါရောင်နီလာ၊ ပန်းရောင်လည်ကြိုးများ၊ Mandarin Mandarin များ၊
ဤအချိန်တွင် Gabrielle Chanel သည်ရုရှားယဉ်ကျေးမှု၊ သင်္ကေတများနှင့်ဖက်ရှင်များနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်လာခဲ့သည်။ သူမသည်၎င်းတို့၏ကံကြမ္မာ၏ကြီးမားသောအစိတ်အပိုင်းများကိုသိမ်းဆည်းရန်၊ ပါရီနှင့်ဘီရာရီဇ်နှင့်နယူးကာဆယ်ရှိသူတို့၏အပန်းဖြေစခန်းများနှင့်တွေ့ဆုံရန်စီမံခဲ့ကြသောအကံကောင်းဆုံးထွက်ခွာသွားသူများနှင့်ပေါင်းသင်းခဲ့သည်။
တစ် ဦး ကရုရှားမတ်ေတာကိစ္စ
Gabrielle Chanel သည်သူမအတွက်အလွန်ထူးခြားသည့်ဤယဉ်ကျေးမှုကိုအလွန်နှစ်သက်သည်။ ဝေးလံသောဒေသမှလာသည်။ သူ၏အရောင်များ၊ အနုပညာနှင့်စိတ်ဓာတ်များကိုစုပ်ယူသည်။
သို့သော်ရုရှားကမ္ဘာအတွက်ဤစိတ်ဝင်စားမှုသည်မတော်တဆတိုက်မိခြင်းမဟုတ်ပါ။ ၎င်းကို Mademoiselle သည် Grand Duke Dmitri Pavlovich အပေါ်စွဲစွဲလမ်းလမ်းလျှောက်ခဲ့ပြီး Tsar Nicholas II ၏ ၀ မ်းကွဲတစ် ဦး - အရောင်အသွေးစုံလင်သောမျက်လုံးများရှိသည့်ဆွဲဆောင်မှုရှိသောလူငယ်တစ်ယောက်ဖြစ်သည်။
ဒင်မီသည်ရုပ်ရှင်ကြယ်ပွင့်အသွင်အပြင်နှင့် Chanel မူးယစ်ဆေးဝါးတွေ့ရှိခဲ့သည့်စွဲမက်ဖွယ်ရုရှားဆွဲဆောင်မှုများကိုပိုင်ဆိုင်သည်။
ရုရှားနိုင်ငံမှ Grand Duke Dmitri Pavlovich (1891-1942) c ။ 1915. (APIC / Getty Images မှဓာတ်ပုံ)
ပြင်သစ်နိုင်ငံ Biarritz ရှိ Gabrielle Chanel နှင့် Grand Duke Dmitri Pavlovich, 1924, Collection Chanel © DR
သူတို့နှစ် ဦး သည် ၁၉၁၁ ခုနှစ်တွင်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး ၁၉၂၀ တွင် Biarritz ၌ပြန်လည်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ Gabrielle သည်သူမ၏ဖက်ရှင်စုဆောင်းမှုများ၌အင်အားကြီးမားစွာပြန်သွားနိုင်မည့်ရုရှားဒီဇိုင်းများကိုသိရှိနားလည်ပြီးတန်ဖိုးထားလာသည်။
Gabrielle Chanel သည် Dmitri ၏အစ်မဖြစ်သော Grand Duchess Maria Pavlovna နှင့်ရင်းနှီးသောခင်မင်ရင်းနှီးမှုတည်ဆောက်ခဲ့သည်ကိုမှတ်သားရန်အချက်တစ်ခုမှာစိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်သည်။ Coco သည်မာရီယာအား Kitmir အမည်ရှိပန်းအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲဖွင့်ရန်တိုက်တွန်းချိန်တွင်စီးပွားဖြစ်လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ ၁၉၂၁ မှ စ၍ သူမ၏သီးသန့်ထုတ်လုပ်မှုကိုအာမခံသည်။
Le Paris Russe de Chanel, Blé Maria Tiara ။ ရွှေဝါရောင်၊ ရွှေဖြူ၊ ပန်းရောင်လည်ဆွဲများ၊ Mandarin Mandarin များ၊ အရောင်တူလေးများနှင့်စိန်များဖြစ်သည်။
ရုရှားနိုင်ငံမှ Grand Duchess Maria Pavlovna (၁၉၁၂) ။ Maria Pavlovna (၁၈၉၀-၁၉၅၈) သည် Grand Duke Paul Alexandrosich နှင့်ဂရိမှ Alexandra Georgievna တို့၏သမီးဖြစ်သည်။ ၁၉၀၈ ခုနှစ်တွင်ဆူးဘုရင် Gustav V ၏ဒုတိယမြောက်သားSödermanland၏ Duke မင်းသား Vilhelm နှင့်လက်ထပ်ခဲ့သည် (Fine Art Images / Heritage Images / Getty Images မှဓာတ်ပုံ)
Le Paris Russe de Chanel, Foulard လည်ဆွဲ။ ရွှေ၊ အဖြူရောင်၊ ပလက်တီနမ်၊ ရှဟံ၊ ကြွေ၊
Vogue (ပဲရစ်) ။ 1922/04/15 ။ Kitmir အလုပ်ရုံများကပန်းချီကားများကိုချယ်လ်ဆီးတီထွင်ခဲ့သည်။
ဒီမသာ။ မင်းသား Dmitri သည်နယ်နှင်ခံပြည်သားအချို့ကို Mademoiselle ကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် Almanach de Gotha တွင်ဖော်ပြထားသောရုရှားမှူးမတ်များကိုမော်ဒယ်လ်များနှင့်အရောင်းစာရေးအမျိုးသမီးများအဖြစ်အသုံးချခြင်းအတွက်သူမကိုယ်တိုင်ဂုဏ်ယူခဲ့သည်။ ထိုအထဲတွင်မင်းသား Koutoussoff သည်သူမ၏ကိုယ်ပိုင်အတွင်းရေးမှုးအဖြစ်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။
ရုရှားလူမျိုးများသည်အမျိုးသမီးများအားအလုပ်ခွင်သို့မ ၀ င်ရောက်နိုင်ရန်သင်ကြားပေးခဲ့သည်။ အကြှနျုပျ၏ခမ်းနားထုံးတမ်း knitters အဖြစ်ငါ့အဘို့အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
Claude နှောင့်နှေး, CHANEL Solitaire, Gallimard, 1983
Gabrielle Chanel ဟာရုရှားကိုဘယ်တော့မှမလာဘူး။ သို့သော်ဤဝေးလံသောစကြာ ၀ universeာနှင့်ပတ်သက်သောစိတ် ၀ င်စားမှုသည်သူမစိတ်ကူးစိတ်သန်းတွင်အားကောင်းနေဆဲဖြစ်ပြီးသူမအလုပ်ကိုရောသူမ၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင်တွင်ပါလွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည် (ဖွင့်လှစ်သောဗွီဒီယိုတွင်ပါရှိသည့်ကြေးမုံသည်သူမ၏ပါရီမြို့ရှိတိုက်ခန်းတွင်နံရံတွင်ချိတ်ဆွဲထားသည်) ။
သူမရဲ့ဖန်တီးမှုပါရမီကသူမရဲ့အ ၀ တ်အထည်ကိုအနည်းငယ်မျှသာလတ်ဆတ်သောအရောင်အသွေးစုံလင်သောအရောင်များနှင့်ရုရှားမှရိုးရာပန်းထိုးသည့်ပစ္စည်းများနှင့်ပေါင်းစပ်ရန်ခွင့်ပြုခဲ့သည်။ ဤသည်ကိုဆန်းသစ်တီထွင်သောဖက်ရှင်ကိုအများပါ ၀ င်သောနည်းဖြင့်ပြောင်းလဲခြင်းနှင့်ကြွယ်ဝစေခြင်း။
Le Paris Russe de Chanel, Sarafane လည်ဆွဲ။ ရွှေဖြူ၊ ယဉ်ကျေးသောပုလဲနှင့်စိန်များ။ "sarafane" သည် ၂၀ ရာစုအစတွင်မြောက်ပိုင်းနှင့်ရုရှားနိုင်ငံအလယ်ပိုင်းရှိအမျိုးသမီးများဝတ်ဆင်ထားသည့်လက်ပြတ်ရှပ်အင်္ကျီဖြစ်သည်။
1923 Chanel ရုရှားရှပ်အင်္ကျီ။
ဤသည် Chanel မြင့်ရတနာစုဆောင်းမှု၏အရင်းအမြစ်ဖြစ်ပါတယ် Le Paris Russe de Chanel.
စုဆောင်းခြင်းသည်သင်္ကေတများဖြင့်ရောင်ပြန်ဟပ်သည်။ ၎င်းသည်ရုရှားအလှဆင်အနုပညာများမှပန်းချီကားများကိုတောက်ပသောအရောင်များဖြင့်ပန်းထိုးခြင်းများကိုပြန်လည်အနက်ဖွင့်သည် ချစ်သူ (အစဉ်အလာတောင်သူလယ်သမားများဝတ်လေ့ရှိသောအမျိုးသားဝတ်အင်္ကျီသို့မဟုတ်အင်္ကျီ။ ၎င်းသည်ခါးပတ်ပတ်လည်တွင်ခါးပတ်ပတ်ထားလျက်၎င်းသည်ပခုံးများ၊ ကော်လာပတ်ပတ်လည်နှင့်အောက်အနိမ့်ပိုင်းရှိပန်းထိုးများဖြင့်တန်ဆာဆင်ထားသည်) ။
Le Paris Russe de Chanel, Roubachka လည်ဆွဲ။ ရွှေဝါရောင်၊ ပလက်တီနမ်၊ အဝါရောင်နှင့်အဖြူရောင်စိန်များ။
ဒါဟာအစမှုတ်သွင်း re- အကျင့်ကိုကျင့်ဖြတ်တောက်မှု kokoshnikရိုးရာကတ္တီပါခေါင်းစည်းသည်ပုလဲနှင့်အလှဆင်ထားသည်။
ရိုးရာ kokoshnik ကိုဝတ်ထားသည့် Anna Pavlova (Fine Art Images မှဓာတ်ပုံ / Heritage Images / Getty Images) ။ Anna Pavlova သည် ၁၈၈၁ တွင်မွေးဖွားသောရုရှားသိပ္ပံပညာရှင်တစ် ဦး ဖြစ်သည်။ သူသည် Imperial Russian Ballet တွင်အဓိက dancer နှင့် Serge Diaghilev's Ballet Russes တို့တွင်ဖြစ်သည်။
Le Paris Russe de Chanel, Sarafane လက်ဆွဲအိတ်ကိုလည်ဆွဲအဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ရွှေဖြူ၊ ယဉ်ကျေးသောပုလဲနှင့်စိန်များ။
၎င်းပုံစံများနှင့်အရောင်များသည် Chanel Fine Jewellery Creation Studio ကိုအကောင်းဆုံးစိန်များဖြင့်အလှဆင်ထားသောလည်ဆွဲများ၊ ခေါင်းအဆင်တန်ဆာများ၊ ပုတီးစေ့များ၊ လက်စွပ်များနှင့်အသွင်အပြင်များကိုဒီဇိုင်းပြုလုပ်ရန် Chanel Fine Jewellery Creation Studio ကိုလှုံ့ဆော်ပေးခဲ့သည်။
Le Paris Russe de Chanel၊ ပါရီရှိဘဲလေးရုဇ်၊ ၁၉၁၃ ။
Le Paris Russe de Chanel, Folklore Ring ။ ရွှေဖြူ၊ အဝါရောင်ရွှေ၊ ကြွေပြား၊ ပန်းရောင် spinel၊ အပြာရောင်နီလာနီလာ၊ Mandarin နှင့် tsavorite garnets၊ ယဉ်ကျေးသောပုလဲနှင့်စိန်များဖြစ်သည်။
Le Paris Russe de Chanel Gabrielle Chanel နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သူများအပေါ်နေထိုင်ခဲ့သည့်ပျောက်ကွယ်သွားသောကမ္ဘာအတွက်ရှုပ်ထွေးသောလွမ်းဆွတ်မှုများဖြင့်ပြည့်နှက်နေသောစုဆောင်းမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ သူမဘယ်တော့မျှမသွားခဲ့ဖူးသော်လည်းတိုင်းပြည်တည်မြဲသောအထင်အမြင်ကိုခံစားခဲ့ရသည်။
Le Paris Russe de Chanel, Folklore Cuff ။ ရွှေဖြူ၊ ရွှေဝါရောင်၊ ကြွေပြား၊ နီလာပြာရောင်၊ နီလာပန်းရောင်၊ Mandarin နှင့် tsavorite ကျောက်မျက်ရတနာများ၊ ယဉ်ကျေးသောပုလဲနှင့်စိန်များဖြစ်သည်။
Tags:Chanel • မြင့်မားသောရတနာ
မှတ်ချက်0ခုLe Paris Russe de Chanel"